လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ရင်း ကြွေလွင့်ခဲ့ ရတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်း တွေ အတွက် အလှူငွေများ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီး ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ရင်း ကြွေလွင့်ခဲ့ ရတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်း တွေ အတွက် အလှူငွေများ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီး ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ရင်း ကြွေလွင့်ခဲ့ ရတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်း တွေ အတွက် အလှူငွေများ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီး ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုရတီစိုး က တော့ မနေ့က မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေအပြင် တခြားအလှူရှင်တွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့ တစ်နေ့ထဲမှာပဲ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လှုပ်ရှားပါဝင်ရင်း အသက်ပေး လိုက်ရတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်း တွေဖြစ်တဲ့ လှော်ကားက မောင်ညီညီအောင်ထက်နိုင် ၊ တောင်ဒဂုံက မောင်ဟိန်းထွဋ်အောင် ၊ လှိုင်သာယာက ဆရာမကြီး ဒေါ်တင်နွဲ့ရီ အပြင် ကျိုက်ထိုမြို့က မောင်ဇင်လင်းထက် တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးအတွက် အလှူငွေများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီး ကူညီ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နန်းဆုရတီစိုး က သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပုံရိပ်လေးတွေ ကိုလည်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် မှာ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ယခုလို အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေ အတွက် ကူညီ ထောက် ပံ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နန်းဆုရတီစိုး က ပြောပြထားရာမှာလည်း “နန်းဆုတို့သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ တခြားအလှူရှင်တွေစုလှူတဲ့ နာရေးအတွက်ကူငွေများကို ဒီနေ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ကူငွေ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်….. တစ်ရက် အတွင်းအလှူ အားလုံးပေါင်း စုစုပေါင်း (၁၀၅) သိန်း ရရှိပါတယ်…. နန်းဆုကတော့ တတ်အားသလောက်လေး (၁၀)သိန်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်…..ဒီနေ့မှာ လှော်ကား က မောင်လေး ညီညီအောင်ထက်နိုင် ရဲ့ နာရေးအတွက် (၁၁) သိန်း, တောင်ဒဂုံက ကိုဟိန်းထွဋ်အောင် ရဲ့ နာရေးအတွက် (၁၂) သိန်း , လှိုင်သာယာက ဆရာမ ဒေါ်တင်နွဲ့ရီရဲ့ နာရေးအတွက် (၁၁) သိန်း ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပေးအပ် အားပေးစကားပြောပြီး , ကျိုက်ထိုမြို့မှ မောင်လေး ဇင်လင်းထက်ရဲ့နာရေးအတွက် (၁၅) သိန်း ကိုတော့ငွေလွှဲမှ တစ်ဆင့် ကူညီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် …….
နောက်ရက်တွေမှာ တခြားသူများကို ဆက်သွယ် ကူညီပေးအပ်သွာ းပါ့မယ်ရှင့် …ပါဝင်ကုသိုလ်ယူကြသော အလှူရှင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို လေးစားဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်ပါတယ်….. အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းပြည်သူများအားလုံးကို လေးစားဂုဏ်ယူဦးညွှတ်ပါတယ်……ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများကို နန်းဆုတို့ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ဆက်စောင့်ရှောက်ကူညီသွားပါ့မယ်ရှင့်” ဆိုပြီး ရေးသားပါတယ်။ ကဲ…ပရိသတ်ကြီးရေ ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေအတွက် တက်နိုင်တဲ့ဘက်နေ အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး တို့ကို ဆုမွန်ကောင်းလေး တောင်းပေး လိုက်ပါဦး။
Previous post ဆန္ဒပြတဲ့ ပြည်သူတွေ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတာ အနုပညာရှင် တွေကြောင့် လို့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုနေတဲ့ သူတွေကို ပြန်လည် ဖြေရှင်း လိုက်တဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်
Next post မြို့လယ်ခေါင် ဓားထိုးမှုမှာ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ ကာပြီး ကာကွယ် ပေးခဲ့တဲ့ မဇာခြည်ဦး ကို ပြန်လည် ကူညီကြဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်တဲ့ အောန်ဆိုင်း